यो गुप्त सीपीए टुकी 2.0 : तपाईंको पहिलो टुकी कसरी सिर्जना - टुकी दिन
यो गुप्त सीपीए टुकी 2.0 : तपाईंको पहिलो टुकी कसरी सिर्जना
तत्काल बिक्री उत्पन्न सीपीए टुकी कसरी सिर्जना
नमस्ते फ्रान्सिस यहाँ धेरै लागि फेरि धन्यवाद तपाईंको प्रतिक्रिया. र रूपमा यहाँ प्रतिज्ञा चरण पुस्तिका द्वारा आफ्नो चरण धेरै पहिले आफ्नो निर्माण गर्न छ गुप्त सीपीए टुकी.
सधैं यहाँ सुन्न र तपाईं मोल दिन. त्यसैले चिन्ता छैन मलाई कुनै पनि समयमा मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ [email protected]
Reminding : तपाईं आफ्नो सोली सिर्जना गर्न उपकरण निम्नलिखित
एक साइट (डोमेन नाम) र / वा clickfunnel
3 गर्न4CPA प्रस्ताव
शीर्ष7तपाईंको पहिलो टुकी निर्माण गर्न कदम
यो आफैलाई निर्माण यहाँ कदम निम्न छन् गर्न
namecheap मा डोमेन प्राप्त
आफ्नो सेवा प्रदायक खातामा डोमेन जडान
तपाईंको Clickmagic गर्न डोमेन जडान
जडान घूर्णनशील यंत्र या र आफ्नो सोली
Clickmagic मा प्रस्ताव थप्न
तपाईंको यातायात अभियान सुरु
मैले किने2डोमेन (र घूर्णनशील यंत्र या डोमेन रूपमा clickmagic लागि मुख्य साइट एक अर्को). तिनीहरू केवल खर्च $5.76 किनभने म .me लागि जाँदै छु
तपाईंको खाता होस्टिंग गर्न डोमेन जडान
म मेरो डोमेन होस्ट गर्न HostNine प्रयोग छु. म यहाँ डोमेन नाम सर्भर परिवर्तन गर्न किन हो.
आफ्नो सेवा प्रदायक कम्पनी सम्पर्क तपाईं यसलाई कसरी के थाहा छैन भने वा केवल आफ्नो DNS लागि अनुरोध. तिनीहरूले आफ्नो आफ्नै सर्भर आफ्नो डोमेन दर्शाउन मदत गर्नेछ.
त्यसपछि पनि त्यहाँ आफ्नो डोमेन थप्न आफ्नो cPanel जाने.
तपाईंले सही यसलाई गरे भने तपाईं यो जस्तै केहि प्राप्त हुनेछ
बधाई. अब तपाईं ब्रान्ड नयाँ डोमेनमा WordPress स्थापना गर्न आवश्यक. चिन्ता नगर्नुहोस्, very easy or you can go to Youtube and search for « how to install wordpress »
एक पटक यहाँ पूरा परिणाम हो.
कि पछि तपाईं स्थापना गर्न Instabuilder यदि तपाईं संग छैन जानेछ clickfunnels. यो प्लगइन स्थापना गर्न तल कदम पालना (यो निःशुल्क छैन)
त तपाईं यसलाई सक्रिय र आफ्नो लाइसेन्स सम्मिलित मैले गरे जस्तै छ.
सबै सही. अब तपाईं Instabuilder वा CLickfunnel ठ्याक्कै सिर्जना गर्न प्रयोग4pages like the ones below :
म किनभने तपाईं त्यसो गर्न आफ्नै ट्युटोरियल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ तिनीहरूलाई कसरी निर्माण गर्न देखाउन छैन जाँदै छु. र शब्द के मैले गरे द्वारा ठीक शब्द प्रतिलिपि छैन.
तपाईंको Clickmagic खातामा डोमेन जडान
हामी किनेको दोस्रो डोमेन चयन. भनेर हामी Clickmagic संग प्रयोग गर्नेछ एक हो.
थप www.clkmr.com. Wher you have the red bar. म त तिमी दिनुभयो के त्यहाँ अघिल्लो डाटा प्रतिस्थापन. And you go to your Clickmagic account :
उपकरण / डोमेन प्रबन्धक क्लिक गर्नुहोस् र मैले गरे जस्तै आफ्नो दोस्रो डोमेन त्यहाँ थप्न. माथि चित्र हेर्नुहोस्.
Then you have to create your rotator : मैले गरे जस्तै Rotators / सिर्जना गर्नुहोस् नयाँ घूर्णनशील यंत्र या त फारम फारम भर्न क्लिक.
तपाईं सधैं आफ्नो सहायता खण्ड प्रयोग गर्न तपाईं कसरी यो ठीक के थाहा छैन भने. 🙂
राम्रो काम मित्र.
जडान घूर्णनशील यंत्र या अनि तपाईंको टुकी
तपाईं यसलाई गरे किनभने तपाईं को साँच्चै गर्व. यो भाग पढेर तर यहाँ सम्म कार्य लिएर कुनै. तपाईं सफलता योग्य र तपाईं टाढा हुनुहुन्न.
अब तपाईं बस सिर्जना आफ्नो घूर्णनशील यंत्र या लिंक प्रतिलिपि आफ्नो सोली टाँस्नुहोस् जाने
पृष्ठ निम्न लागि कार्य बटन अन्तर्गत तपाईंको लिंक पेस्ट
Clickmagic मा offfers थप्न
तपाईं अहिले के गर्न छ सबै आफ्नो सीपीए आफ्नो Clickmagic घूर्णनशील यंत्र या मा प्रदान गर्दछ सम्मिलित छ र तपाईं आफ्नो सोली मा केहि छुन छैन.
यदि एउटा प्रस्ताव मृत्यु, तपाईं बस यसलाई सिधै clickmagic छैन सोली मा प्रतिस्थापन.
यहाँ सीपीए म Maxbounty नेटवर्कबाट छनौट प्रदान गर्दछ.
र अन्तमा तपाईं अर्को चरण आफ्नो सोली गर्न विशाल यातायात ड्राइव छ हुनुहुन्छ, आराम र आफ्नो खातामा पैसा रोल हेर्न.
त्यसैले ... फेरि , यदि तपाईँले हराएको महसुस, बस मलाई सम्पर्क. म यहाँ मदत गर्न हुँ.
तपाईं dfy सोली डाउनलोड गर्न नबिर्सनुहोस्.
तपाईं एक छैन भने आफ्नो खाता यहाँ सिर्जना
यसलाई यहाँ डाउनलोड.
तपाईं कुनै पनि प्रश्न छ भने मलाई थाहा.
दिन टोली को टुकी